Tọzdee, Febụwarị 28, 2013 Mọnde, Febụwarị 1, 2016 Douglas Karr
Taa, enwere m ezigbo ụbọchị na ndị ọrụ weebụ na ndepụta Angie. Ndepụta Angie na-emepe saịtị ha ka ọ bụrụ ọba akwụkwọ ọgụgụ dị ịtụnanya… yana oge niile ha gara n'ihu na-eme ka saịtị ha dị ngwa. Ibe ha na-ebu ibu na ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, bulie ibe a na Garage rszọ. Peeji ahụ webatara onyonyo, vidiyo, na bọtịnụ mmekọrịta social ma ka na-ebu ibu na milliseconds. Tụle saịtị ha na nke m dị ka ịgba ọsọ
Sọnde, Septemba 12, 2010 Monday, September 13, 2010 Douglas Karr
Na nso nso a, a na m eme ọtụtụ nyocha na vidiyo maka ndị ahịa m. Vidio na-aghọ nnukwu ihe na ahụmịhe ịntanetị; n'eziokwu, enwere ezigbo ohere na saịtị gị ga-agafe ezigbo pasent nke ndị ọbịa ọ gwụla ma ị nyere vidiyo. Ọhụrụ smart phones na-kachasị maka video na viewership na iti mkpu. Youtube abụrụla engine nke abụọ kachasị na ịntanetị. Ma nyiwe vidiyo ndị ọzọ dị